होटल म्यानेजमेन्टमा अवसरैअवसर - विवेचना
होटल म्यानेजमेन्टमा अवसरैअवसर
November 29, 2017 1,365 Views
पर्यटनको ठूलो सम्भावना भएको देश हो नेपाल । पर्यटनलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार नै मानिन्छ । र, पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो, सुव्यवस्थित होटल । व्यवस्थित होटलका लागि आवश्यक हुन्छ, उत्कृष्ट होटल म्यानेजमेन्टसहितको सेवा ।
नेपालमा पर्यटकीय क्षेत्र प्रशस्तै छन् । आफ्नै देशभित्रका रमाइला ठाउँहरु पनि घुम्नुपर्छ भन्ने आवश्यकताको महसुस हुन थालेको छ । पर्यटनको महत्व बुझेकै कारण आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् । त्यसैलाई लक्षित गरेर होटलहरु पनि धेरै खुलेका छन् । विशेष गरी सहर-बजारमा । तर, धेरैजसो होटल सञ्चालकलाई राम्रो सेवा दिनसक्ने मेनपावरको अभाव खड्किइरहेको छ । आधुनिक जमानामा आजका पर्यटकले आधुनिक सेवा नै चाहन्छन् । अझ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा ।
होटल सञ्चालकको टाउको दुखाइ र होटल म्यानेजमेन्टलाई नै केन्द्रित गरी दक्ष बनाउने शैक्षिक संस्थाको अभावलाई बुझेका दुई झापाली युवा निर्मल निरौला र आलोक कार्की दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । २०७३ सालमा बिर्तामोडमा इस्टर्न इम्पायर कलेज अफ होटल म्यानेजमेन्ट सञ्चालन गरेर केवल होटल सम्बन्धी मेनपावर मात्रै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर उनीहरु मेहनत गरिरहेका छन् ।
‘अटोमोबाइल्सपछि दोस्रो बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो होटल इन्डस्ट्रिज’, सञ्चालक आलोक भन्छन्, ‘विश्वमा होटलका कर्मचारीको माग कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन ।’ विदेशबाट बारम्बार होटलमा काम गर्ने नेपाली कामदारको माग आइरहन्छ । तर, मागअनुसार कामदार जान सक्दैनन् । ‘होटल सम्बन्धी काममा नेपाली कामदार विदेश पुगे पनि काम नजान्दा रेस्पेक्ट पाउँदैनन्’, आलोकले भने, ‘होटलसम्बन्धी सीप नजान्दा भाँडा माझ्ने र रुम सफाइमा काम गर्न नेपाली बाध्य छन् ।’ कम्तीमा यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपालीले होटलको काममा सम्मान पाउने वातावरणको सिर्जना गर्न आफूहरुले इस्टर्न इम्पायर सुरु गरेको उनले बताए ।
हुन त अर्का सञ्चालक निर्मलले प्लस टुमा होटल म्यानेजमेन्ट पढ्दा ‘भाँडा माझ्ने पेसा के पढेको ?’ भन्नेहरु प्रशस्तै थिए । उनी भन्छन्, ‘होटल पेसालाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै फरक थियो, अहिले आएर मात्रै हो धेरैले बुझ्न थालेको, यो पनि सम्मानित पेशा हो भनेर ।’
निर्मलले पढाइसकेपछि काठमाडौँमा रेस्टुरेन्ट मेनेजरको रुपमा काम गर्दै गर्दा उनलाई बन्दीपुरका साहुले मन पराएर त्यहाँ लिएर गए । बन्दीपुर पुगेपछि उनले पर्यटन र होटलको सम्बन्धलाई फरक ढङ्गले बुझे । कामदार अभावमा अव्यवस्थित बनेका होटललाई पनि बाह्य मुलुकबाट आउने पर्यटकले महँगो शुल्क बुझाइरहेको थाहा पाए । त्यहाँको थ्री स्टार रिसोर्टमा डेढ वर्ष काम गरेपछि उनी फेरि काठमाडौँ फर्किए । जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर । केही कलेजहरुमा होटल म्यानेजमेन्ट विषय पढाए पनि । तर, उनको मन यतिमै थामिएन । आफ्नै ठाउँमा केही योगदान र्पुयाउनुपर्छ भनेर उनी झापा आए । झापाका विभिन्न कलेजमा होटल म्यानेजमेन्ट विषय पढाइरहेका आलोक कार्कीसँग उनको भेट भयो । दुवैको उद्देश्य मिलेपछि सुरु भएको हो इस्टर्न इम्पायर कलेज ।
‘यहाँ पढाइ नै नभएर होइन हामीले यो कलेज सुरु गरेको’, निर्मलले कलेज सुरु गर्नुको कारण सुनाए, ‘कलेजमा एउटा मात्रै विषयगत पुस्तक होटल म्यानेजमेन्ट हुने, त्यो पनि प्राक्टिकल एकदमै कम हुने देख्यौँ । सर्टिफिकेटका लागि मात्रै पढेजस्तो ।’ उनले होटल म्यानेजमेन्ट प्राक्टिकल विषय भएकाले सर्टिफिकेटले मात्र काम नगर्ने बताए ।
‘पढाउने शिक्षकले पनि यो विषयलाई सम्मान दिन सकेका छैनन्’, अर्का सञ्चालक आलोक भन्छन्, ‘होटल म्यानेजमेन्टमा स-सानो कुराले धेरै महत्व राख्छन्, तिनलाई छोड्दै पढाउँदा भोलि त्यही सानो कुरामा विद्यार्थीले अपमान सहनु पर्ने हुनसक्छ ।’ पढ्दा विद्यार्थीले आर्थिक खर्चसँगै समय पनि लगानी गरिरहेका हुन्छन् । पढिसकेपछि उनीहरुले त्यसको प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् आलोक । उनी भन्छन्, ‘पढ्नु भनेको सिक्नु हो, सिकाइले भविष्यमा काम दिनुपर्छ ।’
नेपाली विद्यार्थी पढाइको विषय रोज्दा अन्योलमा पर्ने गरेको दुवै सञ्चालकको बुझाइ छ । हरेक विद्यार्थीलाई पढ-पढ त भनिन्छ तर पढेपछि के गर्ने ? पढाइबाट सर्टिफिकेट मात्रै लिने हो कि कामको अवसर पनि पाउने त ?
‘पढाइको विषय रोज्दा दुई विकल्प छन्, पहिलो धेरै पढेर पीएचडी गर्ने र दोस्रो हो व्यावहारिक शिक्षा लिएर पैसा कमाउने’, सञ्चालक आलोक भन्छन्, ‘पढिसकेर कि देशमा काम गर्ने हो, नत्र विदेश रोज्ने ।’ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्दा स्वदेश र विदेश दुवै ठाउँमा अवसरै अवसर भएको र कामको ग्यारेन्टी पनि हुने भएकाले यसमा युवाको आकर्षण बढेको उनले बताए ।
विद्यार्थी बिदाइमा सामुहिक तस्वीर लिँदै इस्टर्न इम्पायरका विद्यार्थी र सञ्चालकद्वय लगायत ।
१८ महिना अघि २४ जना विद्यार्थीका साथ सुरु भएको इस्टर्न इम्पायर कलेजमा अहिले १०५ जना विद्यार्थी होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गरिरहेका छन् । होटललाई आवश्यक सामग्रीदेखि भाषागत सिकाइलाई कलेजले विशेष ध्यान दिएको छ । ‘होटल’ शब्द फन्चबाट आएको र होटलमा अधिकांश फन्च ल्याङग्वेज प्रयोग हुने भएकाले यो भाषालाई प्राथमिकतामा राखेर पढाइ हुने सञ्चालक निर्मलले बताए ।
यस कलेजमा होटलका लागि आवश्यक इङ्लिस, मार्केटिङ, होटलसम्बन्धी एकाउन्ट, हस्पिटालिटी, फट अफिस, हाउस किपिङ, फुड प्रोडक्सन र फुड एन्ड ब्रेभरेज सर्भिस सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान दिइने गरेको छ । ‘विश्वमा होटल म्यानेजमेन्टमा भइरहेको परिवर्तनमा अपडेट हुँदै छुट्टै होटलकै लागि मात्रै अपग्रेड जनशक्ति तयार गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो’, उनले भने ।
एसएलसी सकेका विद्यार्थीले एचएम गर्न सक्ने र १५ महिने कोर्स सकेर प्राक्टिकलका लागि एक वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावहारिक सीपका लागि बाहिरी देश पठाउने गरेको उनले सुनाए । यस वर्ष कलेजले २४ जना विद्यार्थी बहराइन, मोरसियस र चाइना जान लागेका विद्यार्थीलाई बिदाइ गरेको छ । १५ महिने एड्भान्स डिप्लोमा इन हस्पिटालिटी मेनेज्मेन्ट कोर्स गरेपछि उनीहरु इन्टर्नसिपका लागि उनीहरु विदेश जान लागेका हुन् ।
Previous बुवाआमा भेट्न बालकले गरे बसमुनि बसेर ८० किमी यात्रा
Next खुल्ला दिसामुक्त घोषणाका लागि झापामा अपर्याप्त बन्दै सरसफाई प्रबद्र्धन आपूर्ति पक्ष